ပရီမီယာစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ (ရုပ်/သံ) | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ပရီမီယာစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ (ရုပ်/သံ)
ပရီမီယာစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ (ရုပ်/သံ)
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ထဲက ပရီမီယာစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေ လိုက်လျောမှုမရှိတာကြောင့် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို MCN သတင်းထောက် တင်မောင်ထွေးက ပေးပို့ထားပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုဖို့နဲ့ ဥပဒေပါ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ စတဲ့တောင်းဆို ချက် ၁၄ ချက်ကို ပရီမီယာစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေက တောင်းဆိုနေကြတာပါ။ ဖဖေါ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သလို ဖဖေါ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ အလုပ်ရှင်နဲ့ ၆ ကြိမ် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်ထဲက အချက် ၆ ချက်ကို သဘောတူထားတာရှိပေမယ့် အဲဒီညှိနှိုင်းမှုအပြီးမှာ အလုပ်ရှင်ဘက်က အားလုံးကို မလိုက်လျောနိုင်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ အလုပ်သမားတွေ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။
Soundbite. မခင်မမ (အတွင်းရေးမှူး) ပရီမီယာကော်ဖီအခြေခံအလုပ်သမားသမဂ္ဂ
ပရီမီယာစက်ရုံဘက်က အလုပ်သမားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကို လိုက်လျောပြီးဖြစ်တာကြောင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဝင်ရောက်ဖို့နဲ့ မဝင်ရောက်တဲ့အလုပ်သမားတွေကို မိမိဆန္ဒအလျောက် အလုပ်ကနှုတ်ထွက်တယ်လို့ ယူဆမယ်လို့ ကြေညာ ထားပါတယ်။
အဲဒီကြေညာချက်ကို အလုပ်သမားတွေက သဘောမတူဘဲ အလုပ်ရှင်နဲ့ ပြေလည်တဲ့အထိညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခုလို အလုပ်သမားတွေ စုပေါင်းလမ်းလျောက်ဆန္ဒပြနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စက်ရုံက တာဝန်ရှိသူတွေကို မေးမြန်းရာမှာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ် ခင်ဗျာ။
လှိုငျသာယာစကျမှုဇုနျထဲက ပရီမီယာစကျရုံ အလုပျသမားတှေ တောငျးဆိုထားတဲ့အခကျြတှေ လိုကျလြောမှုမရှိတာကွောငျ့ လမျးလြှောကျဆန်ဒပွခဲ့ပါတယျ။ ဒီသတငျးကို MCN သတငျးထောကျ တငျမောငျထှေးက ပေးပို့ထားပါတယျ။
အလုပျသမားတှေ ခှဲခွားဆကျဆံခွငျးမပွုဖို့နဲ့ ဥပဒပေါ အလုပျသမားအခှငျ့အရေးတှပေေးဖို့ စတဲ့တောငျးဆို ခကျြ ၁၄ ခကျြကို ပရီမီယာစကျရုံ အလုပျသမားတှကေ တောငျးဆိုနကွေတာပါ။ ဖဖျေါဝါရီလ ၂၁ ရကျနကေ့ အလုပျသမားတှေ တောငျးဆိုထားတဲ့ အခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲပွုလုပျခဲ့သလို ဖဖျေါဝါရီလ ၂၂ ရကျနမှေ့ာ အလုပျရှငျနဲ့ ၆ ကွိမျ ညှိနှိုငျးခဲ့ကွပါတယျ။
အလုပျသမားတှေ တောငျးဆိုထားတဲ့ အခကျြထဲက အခကျြ ၆ ခကျြကို သဘောတူထားတာရှိပမေယျ့ အဲဒီညှိနှိုငျးမှုအပွီးမှာ အလုပျရှငျဘကျက အားလုံးကို မလိုကျလြောနိုငျဘူးလို့ ပွောဆိုခဲ့တာကွောငျ့ ဖဖေျေါဝါရီလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ အလုပျသမားတှေ လမျးလြှောကျဆန်ဒပွခဲ့တာပါ။
Soundbite. မခငျမမ (အတှငျးရေးမှူး) ပရီမီယာကျောဖီအခွခေံအလုပျသမားသမဂ်ဂ
ပရီမီယာစကျရုံဘကျက အလုပျသမားတှတေောငျးဆိုထားတဲ့အခကျြတှကေို လိုကျလြောပွီးဖွဈတာကွောငျ့ ဖဖေျေါဝါရီလ ၂၁ ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားပွီး လုပျငနျးခှငျအတှငျးဝငျရောကျဖို့နဲ့ မဝငျရောကျတဲ့အလုပျသမားတှကေို မိမိဆန်ဒအလြောကျ အလုပျကနှုတျထှကျတယျလို့ ယူဆမယျလို့ ကွညော ထားပါတယျ။
အဲဒီကွညောခကျြကို အလုပျသမားတှကေ သဘောမတူဘဲ အလုပျရှငျနဲ့ ပွလေညျတဲ့အထိညှိနှိုငျးပွီး လုပျငနျးခှငျအတှငျး ပွနျလညျဝငျရောကျလိုတယျလို့ ပွောပါတယျ။
အခုလို အလုပျသမားတှေ စုပေါငျးလမျးလြောကျဆန်ဒပွနတောနဲ့ ပတျသကျပွီး စကျရုံက တာဝနျရှိသူတှကေို မေးမွနျးရာမှာ ဖဖေျေါဝါရီလ ၂၇ ရကျနမှေ့ာ ဆကျလကျညှိနှိုငျးသှားဖို့ရှိနတေယျလို့ ပွောပါတယျ ခငျဗြာ။
Previous articleမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ညီလာခံအကြို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ (ရုပ်/သံ)
Next articleလူငယ်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိင်ငံ လူငယ်ရေးရာမူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆွေးနွေးမှုအားနည်းနေ(ရုပ်/သံ)